दुर्गेशले आफ्नो श्रीमती लुकाउनुको कारण यस्तो रहेछ !! – News Nepali Dainik
दुर्गेशले आफ्नो श्रीमती लुकाउनुको कारण यस्तो रहेछ !!
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ समय: १४:५१:५७
###गायक दुर्गेश थापा छोराको बुवा बनेका छन् र यहि खुशियाली साट्दै आफ्नो विवाह भएको समेत दर्शक सामू खुलाएका छन् । श्रीमती प्राची लामाको नाम सहित आफ्नो छोराको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् ।
दुर्गेश थापाले किन श्रीमतीलाई ***आज सम्म लुकाएर राखे भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिन थालेको छ । दुर्गेश थापाले अहिले सम्म श्रीमतीलाई कतै पनि खुलाएका छैनन् साथै न त कुनै तस्विर नै राखेका छन् । धेरैलाई दुर्गेश सिंगल भन्ने थियो तर अचानक छोरा सहितको तस्विर राख्दा धेरै चखित परेका छन् ।
हालै एक गितको शुटिङ्गको क्रममा दुर्गेश थापाले मिडियासँग कुराकानी गर्दै &**आफूले श्रीमती लुकाउनुको रहस्य बारे बोलेका छन् । आफ्नो चाहना भन्दा पनि श्रीमती कै चाहनाले गर्दा यो कुरा लुकाएको उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले श्रीमतीको बारेमा खुलाउँदा फ्यानहरु घट्ने हुन् कि भनेर श्रीमतीले नै क्यारियरमा फोकस गर्नु भनेर यो कुरा गोप्य राखेका हौँ तर जब छोरालाई हातमा बोकें मेरो आँखाबाट आँशु झर्यो । अनि खु*शी साथ मैले यो खुशी दर्शक सामू व्यक्त गरे।**
Last Updated on: January 29th, 2021 at 2:51 pm